ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေအထောက်အထားများ | Three Proofs of Christ's Resurrection | Real Conversion
THREE PROOFS OF CHRIST’S RESURRECTION
ဧပြီလ ( ၁ ) ရက်၊ သခင်ဘုရား၏နေ့ ညနေပိုင်းတွင်
ဟောကြားသော R. L. Hymers, Jr. ၏ တရားဒေသနာတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။
Lord’s Day Evening, April 1, 2018
“ဤအရာများကို အဂြိပမင်းကြီးသိတော်မူ၏။ ထိုမင်းရှေ့ တော်၌ အကျွန်ုပ်အတိအလင်းလျှောက်ဝံ့ပါ၏။ ဤအမှုအ ရာ တစုံတခုကိုမျှ မင်းကြီးမသိဘဲနေတော်မမူဟု အကျွန်ုပ် ထင်ပါ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ဤအမှုသည် ဆိတ်ကွယ်ရာ အရပ်၌ပြုသောအမှုမဟုတ်ပါ။” (တမန် ၂၆း ၂၆ )
၂၆ ခုမြောက်သော တမန်တော်ဝတ္ထုတွင် ရှင်လုကာက ရှင်ပေါလု၏ တတိယအကြိမ် မြောက် သက်သေခံချက်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ ရှင်လုကာက သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် မှတ် တမ်းတင်ထားရသည့်အချက်မှာ လွယ်လင့်တကူ နားလည်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်တော်၏ သေခြင်းနှင့်ထမြောက်ခြင်းမှတပါး တမန်တော်ပေါလု၏ပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်းထက် ပို၍အ ရေးကြီးသည့် အဖြစ်အပျက်သည် ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးသမိုင်းကြောင်းတွင် အခြားမရှိတော့ ပေ။
ပေါလုသည် ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောကြာခြင်းကြောင့် အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။
“…သေပြီးသောသူတစ်ယောက်နှင့်၎င်းယှဉ်သောပုစ္ဆာအမေးကို အ ကြောင်းပြု၍ အပြစ်တင်ကြ၏။ ထိုယေရှုသည် အသက်ရှင်လျက်ရှိ သည်ဟု ပေါလုဆိုတတ်၏။” ( တမန် ၂၅း ၁၉ )
ထို့နောက် ယခုတွင် ပေါလုသည် လက်တွင် လက်ထိပ်များဖြင့် အဂြိပမင်းကြီးရှေ့တွင် ရပ်ရဲ သည်။ အဂြိပမင်းကြီးကိုယ်တိုင်သည် ဂျူးလူမျိုးပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပေါလုသည် ခရစ် တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ဓမ္မဟောင်းပရောဖက်ပြုချက်၏ အခြေခံအကြောင်းတရားဟောကြားခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ခုခံကာကွယ်ပြောဆိုပါသည်။ အဂြိပ မင်းကြီးကိုယ်တိုင်က ခရစ်တော်၏လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်အသေခံခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း အကြောင်းကို သိရှိခဲ့သည်ဟုဆိုခြင်းအားဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ခုခံကာကွယ် ပြောဆိုခဲ့သည်။ ခရစ် တော်၏လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်အသေခံခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း သုံးဆယ်လောက်က ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသည်။ အဂြိပမင်းကြီးအပါအဝင် ဂျူးလူမျိုးများသည် ထိုအ ကြောင်းကို သိရှိခဲ့ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရှင်ပေါလုက ဤသို့ဆိုပါသည်။
“ဤအရာများကို အဂြိပမင်းကြီးသိတော်မူ၏။ ထိုမင်းရှေ့ တော်၌ အကျွန်ုပ်အတိအလင်းလျှောက်ဝံ့ပါ၏။ ဤအမှု အရာ တစုံတခုကိုမျှ မင်းကြီးမသိဘဲနေတော်မမူဟု အကျွန်ုပ်ထင်ပါ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ဤအမှုသည် ဆိတ်ကွယ်ရာ အရပ်၌ပြု သောအမှုမဟုတ်ပါ။” ( တမန် ၂၆း ၂၆ )
“ဤအရာသည် ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်၌ ဖြစ်ပျက်သောအရာမဟုတ်ပါ။” ဂရိလူမျိုးအများစု တွေ့ မြင်ရသောအရာသာဖြစ်ပါသည်။ ဒေါက်တာ Gaebelein ၏ အနက်ဖွင့်ကျမ်းက ဤသို့ဆိုပါ သည်။
ယေရှုခရစ်၏သာသနာလုပ်ငန်းသည် ပါလက်စတိုင်းတွင် တွင် တွင်ကျယ်ကျယ်ရှိလှသဖြင့် အဂြိပမင်းသည် ထိုအကြောင်းကို ကြားမိပါလိမ့်မည်။ ယေရှု၏သေခြင်းနှင့်ထမြောက်ခြင်းတို့ကို ပြည့် ပြည့်စုံစုံ စစ်ဆေးကြပေလိမ့်မည်။ ယခုအချိန်တွင် ခရစ်ယာန် ဧဝံ ဂေလိတရားအကြောင်းကိုပင် ဆယ့်စုနှစ်သုံးခုမျှ ဟောပြောခဲ့ပြီး ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ထိုအကြောင်းအရာများကို ရှင်ဘုရင်က သိရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်လိမ့်မည်။ “အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုအကြောင့်အရာသည် ဆိပ်ကွယ်ရာ၌ ဖြစ်သောအရာမဟုတ်ပါ။” (The Expositor’s Bible Commentary, Frank E. Gaebelein, D.D., General Editor, Zondervan Publishing House, ၁၉၈၁၊ အတွဲ ၉၊ စာ- ၅၅၄၊ တမန် ၂၆း ၂၅- ၂၇ မှတ်စု )
များစွာသောလူတို့က ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် လူတို့၏ငြင်းပယ်ခံရ သောတံငါသည်အနည်းစုသာ သိရှိသည့် လူမသိသူမသိအဖြစ်အပျက်အချို့သာဖြစ်သည်ဟု ယနေ့တွင် ထင်မှတ်နေကြပါသည်။ သို့ရာတွင် သမ္မာတရားနှင့်အဘယ်အမှုကိုမျှ မဝေးကွာစေ ပါ။ ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် ဣသရေလတိုင်းပြည်တွင် ဂျူးလူမျိုးတိုင်းက သိရှိ ကြပါသည်။ ပြီးတော့ ရောမအင်ပါယာအတွင်း၌လည်း နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်နီးပါး ဟောပြောခဲ့ကြ ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် လျှို့ဝှက်လုပ်ဆောင်သော အမှုအရာ မဟုတ်ပါ။
“ဤအမှုသည် ဆိတ်ကွယ်ရာ အရပ်၌ပြု သောအမှုမဟုတ်ပါ။” ( တမန် ၂၆း ၂၆ )
Dr. Lenski က ဤသို့ဆိုသည်။
ယေရှုခရစ်အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုသမျှတို့သည် နိုင်ငံ ၏အကြီးဆုံးမြို့တွင် ပြောဆိုကြသည်။ ၎င်းတွင် ဆန်ဟင်ဒါရင်းနှင့် ( ရောမ အစိုးရ ) ပိလတ်မင်းတို့လည်း ပါဝင်ကြပါသည်။ ယေရှု သည် လူတစ်မျိုး၏ပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ကျော်စောမှုသည် ပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းနိုင်ငံအထိပါ ပြန့်နှံ့သွားခဲ့သည်။ “လျှို့ဝှက်ခြင်း လုံးဝမရှိပါ။” အဘယ်သူမျှမသိရလောက်အောင် တရားမျှတမှု ကင်းမဲ့သည့်အရာမဟုတ်ပါ။ သို့သော် အလွန်ကြီးမြတ်သောအရာ၊ အဂြိပမင်းတောင်မှ အလွန်တရာစိတ်ဝင်စားသည်အထိ လူအများ ဆီသို့ရောက်ရှိသွားနိုင်သည့် တရားပင်ဖြစ်ပါသည်။ (R. C. H. Lenski, D.D., The Interpretation of the Acts of the Apostles, Augsburg Publishing House, ၁၉၆၁၊ စာ- ၁၀၅၃၊ တမန် ၂၆း ၂၆ မှတ်စု )
ခရစ်တော်၏ရန်သူများသည် ခရစ်တော်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမရှိသည်အ ကြောင်းကို သက်သေပြဖို့ ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကြာ ကြိုးစာအားထုတ်ခဲ့သည်။ သို့သော် မအောင် မြင်ခဲ့ကြပါ။ သူတို့သည် မည်မျှပင် အခက်အခဲကိုကျော်ဖြတ်ပြီး ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ကြသော် လည်း ယေရှုသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံပြီးနောက်တွင် သေလျက်ရှိနေသေး ကြောင်း သက်သေပြရန် အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့ကြပါ။ ရှင်ပေါလုက အဂြိပမင်းအားစကားပြောနေ စဉ်တွင် ထောင်ပေါင်းများစွာသော ယုဒလူမျိုးများ၊ သောင်းပေါင်းများစွာသော တပါးအမျိုးသား များက “ခရစ်တော်သည် သေခြင်းမှ ထမြောက်တော်မူပြီ” ဟု ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါသည်။
ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏ အသက်သွေးကြော၊ အခြေခံအုတ်မြစ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှု၏ခန္ဒာသည် သေခြင်းမှထမြောက်တော်မမူလျှင် ခရစ် ယာန်ယုံကြည်ခြင်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်သည်လည်း ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ တမန်တော် ရှင်ပေါလု ကိုယ်တိုင်က ဤသို့ဆိုပါသည်။
“ခရစ်တော်သည် ထမြောက်တော်မမူလျှင်၊ ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌ အကျိုးမရှိ၊ သင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိ။” ( ၁ ကော ၁၅း ၁၄ )
ခရစ်တော်၏ရန်သူများက ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကို မှန်ကန်ခြင်းမရှိကြောင်းသက်သေပြ ရန်ကြိုးစားနေကြသည်မှာ မထူးဆန်းပါ။ သူတို့သည် ကျဆုံးစမြဲဖြစ်ပါသည်။ Greg Laurie ၏ တင်ပြချက် တော်တော်များများကို ကျွန်ုပ်သဘောမတူပါ။ သို့ရာတွင် ခရစ်တော်၏ထမြောက် ခြင်းအကြောင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၎င်း၏တင်ပြချက်ကိုမူ သဘောတူသည်။ Greg Laurie က ခရစ် တော်၏ထမြောက်ခြင်းကို ငြင်းပယ်သောသူတို့၏ကျဆုံးခြင်းအကြောင်းရင်းသုံးခုနှင့် သေခြင်းမှ ခရစ်တော်၏ထမြောက်ခြင်းအကြောင်း သက်သေအထောက်အထားသုံးခုကို ပေးထားပါသည်။ (Greg Laurie, Why the Resurrection?, Tyndale House Publishers, ၂၀၀၄၊ စာ- ၁၃-၂၄ ) ထိုအကြောင်းအရာများကို ကျွန်ုပ်ပြန်လည် ရှင်းပြပါမည်။
၁။ ပထမအချက်၊ ဗလာကျင်းသောသင်္ချိုင်းဂူ
ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်သည်အကြောင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပထမသက်သေပြချက်မှာ ဗလာကျင်းသောသင်္ချိုင်းဂူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှု၏သင်္ချိုင်းဂူဗလာကျင်းဖြစ်ရသည့်အချက်မှာ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ သူအမှန်တကယ် ရှင်ပြန်ထမြောက်သည်ဟူသောအရာအတွက် အကြီးမားဆုံးသော သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်ဝင်ကျမ်းရေးသားသူ အားလုံးတို့က သေပြီးနောက် သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင် ခရစ်တော်၏သင်္ချိုင်းဂူသည် ဗလာ ကျင်းဖြစ်ခဲ့သည်ဟူသောအချက်ပေါ်၌ တညီတစ်ညွှတ်တည်းထောက်ခံသဘောတူကြပါသည်။ အခြားသက်သေများစွာကလည်း ဗလာကျင်းသောသင်္ချိုင်းဂူအကြောင်းကို ဟုတ်မှန်ကြောင်း သဘောတူလက်ခံကြပါသည်။
ခရစ်တော်၏ထမြောက်ခြင်းကို အစောဆုံးတိုက်ခိုက်မှုမှာ ယေရှု၏ခန္ဒာကိုယ်ကို တစ် ဦးဦးက ခိုးယူဝှက်ထားသည်ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းများက ဤသို့ဆိုကြပါသည်။
“ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့်လူအကြီးအကဲတို့သည် စုဝေး၍ တိုင် ပင်ပြီးမှ စစ်သူရဲတို့အား ငွေအများကိုပေး၍၊ ညအခါ ငါတို့အိပ် ပျော်နေစဉ်တွင် ထိုသူ၏တပည့်တို့သည်လာ၍၊ အလောင်းကို ခိုး သွားကြသည်ဟု သင်တို့ပြောကြလော့။ ထိုအကြောင်းကို မြို့ဝန် မင်းကြားပြန်လျှင်၊ ငါတို့သည် သူ့ကိုဖျောင်းဖျ၍ သင်တို့သည် အမှုမရှိစေခြင်းငှါ ပြုမည်ဟု၊ သွန်သင်သည်နှင့်အညီ၊ စစ်သူရဲတို့ သည် ငွေကိုယူ၍ပြုကြ၏။ ထိုစကားကို ယခုတိုင်အောင် ယုဒလူ တို့သည် အနှံ့အပြားပြောဆိုကြ၏။” ( မဿဲ ၂၈း ၁၂- ၁၅ )
သို့ရာတွင် ဤအငြင်းပွါးမှုသည် လူအများတို့ကိုတော့ အမြင်မဖွင့်စေနိုင်ပါ။ အများအ မြင်ဆိုရလျှင် တပည့်တော်များသည် အလောင်းကိုခိုးယူပြီး ထမြောက်သည်ဟု ဟန်ဆောင်ကြ မည်မဟုတ်ပြောပါသည်။ တပည့်တော်များသည် ခရစ်တော်အဖမ်းခံရပြီး လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ် အသေခံသောအခါ တပည့်တော်များသည် ၎င်းတို့အသက်လွတ်ရန် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြ ပါသည်။ ကြောက်တတ်သောသူတို့သည် ယေရှု၏အလောင်းကို ခိုးယူပြီး ယေရှုသည် သေခြင်း မှထမြောက်သည်ဟု ဟောကြားရဲလောက်အောင် သူတို့သည် သတ္တိရှိကြမည်မဟုတ်ပါ။ မဖြစ် နိုင်သည့် အငြင်းပွါးမှုတစ်ခုသာဖြစ်ပါသည်။ ကိုက်ညီမှုမရှိသည့်အချက်သာဖြစ်ပါသည်။ တ ပည့်တော်များသည် “ယုဒလူတို့ကိုကြောက်သဖြင့်” တံခါးကိုပိတ်ကာ အခန်းထဲ၌ အောင်းနေ ကြလေသည်။ ( ယောဟန် ၂၀း ၁၉ ) သူတို့သည် ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်နေကြသည်။ ယေရှုပြန်၍ ထမြောက်မည်ကို မ ယုံကြပါ။ ခရစ်တော်၏နောက်လိုက် တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ ရောမအစိုးရ ကို ဆန့်ကျင်ကာ ယေရှုအလောင်းကိုခိုးရသည့်စိန်ခေါ်မှုကိုရင်ဆိုင်ရဲသည့် ယုံကြည်ခြင်း သို့မ ဟုတ် သတ္တိမရှိကြပါ။ လုံးဝမဖြစ်နိုင်သည်အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက် လည်းဖြစ်ပါသည်။
ခရစ်တော်၏အလောင်းကို ခိုးယူခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟူသော အခြားသံသယဖြစ်ဖွယ် တစ်ခုမှာ ၎င်း၏ရန်သူများပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအယူအဆရှိသည့်ပြဿနာမှာ ခရစ်တော်၏ရန် သူများသည် သင်္ချိုင်းကို ဒမြတိုက်ဖို့စိတ်ရှိကြမည်မဟုတ်ပါ။ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးနှင့်အခြား ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များက ခရစ်တော်အား ၎င်းတို့၏ဘာသာရေးပုံစံနှင့်အသက်ရှင်ပုံစံကို ပြစ်တင်ရှုပ်ချမှုဖြင့် အသေသတ်ကြသည်။ ဤသူတို့၏ နောက်ဆုံး လိုလားချက်မှာ ခရစ်တော် သည် နောက်တဖန် အသက်ရှင်သည်ဟု လူများကို စဉ်းစားစေကြရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဤဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များက ခရစ်တော်၏ထမြောက်ခြင်း၏ထင်းရှားမှုတစ်စုံတစ်ရာကို ဖယ်ရှားရန် အများကြီးမျှော်လင့်ခဲ့ကြသည်။ ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းက သူတို့သည် ရောမအစိုး ရ ပုန္တပိလတ်မင်းထံသို့သွားခဲ့သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့အား ဆိုထားသည်။
“ထိုလှည့်ဖြားသောသူက၊ ငါသည် သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ထ မြောက်မည်ဟု မသေမှီပြောသည်ကို အကျွန်ုပ်သိမှတ်ပါပြီ။ ထို ကြောင့် သူ၏တပည့်တို့သည် ညအခါလာ၍ အလောင်းကိုခိုးယူပြီး လျှင်၊ သူသည် သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူပြီဟု လူအပေါင်းတို့ အား ပြောဆိုကြသော်၊ ရှေ့အမှားထက် နောက်အမှား သာ၍ကြီး မည်ဟု စိုးရိမ်စရာအကြောင်းရှိသည်ဖြစ်၍၊ သင်္ချိုင်းတွင်းကို သုံး ရက်မြောက်အောင် လုံခြုံစွာ စောင့်စိမ့်သောငှါ အမိန့်ရှိတော်မူပါ ဟု လျှောက်ကြလျှင်။” ( မဿဲ ၂၇း ၆၃- ၆၄ )
ပိလတ်မင်းက “သေချာနိုင်သလောက်” အစောင့်တပ်တွေနှင့်စောင့်ကြည့်စေပါသည်။ အဆင် ပြေနိုင်သည့်အတ်ိုငး သင်္ချိုင်းဂူ၌ အစောင့်တပ်များကို ထားလိုက်သည်။ ( မဿဲ ၂၇း ၆၅ ) ထို့ ကြောင့် သူတို့သည် သင်္ချိုင်းဂူကို တံဆိပ်ခတ်ပြီး ၎င်းကို ကာကွယ်ရန် စစ်တပ်ကိုချထားသည်။ ( မဿဲ ၂၇း ၆၆ ) ထူးဆန်းသည်မှာ ဤယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ တို့သည် တပည့်တော်များထက်ပင် ခရစ်တော်၏ထမြောက်ခြင်းကို စိတ်ချခဲ့ကြသည်။
မှန်ကန်သောအရာတစ်ခုမှာ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည် ခိုယူခြင်းမှ ခရစ်တော် ၏အလောင်းကိုထိန်းသိမ်းထားရန် အလေးအနက်ထားကြသည်။ သူတို့က သေခြင်းမှ ထ မြောက်မည်ဟူသော ယေရှု၏ကတိစကားသည် မုသာဖြစ်ကြောင်းကို သက်သေပြလိုကြပါ သည်။ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည် ခရစ်တော် သေခြင်းမှထမြောက်သည်ဟူ၍ ပျံ့နှံ့ သောအကြောင်းအရာများကို ဖယ်ရှားပစ်ရန် သူတို့လုပ်ဆောင်သမျှကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါ သည်။ အလောင်းကိုခိုးယူခြင်းသည် ၎င်း၏ရန်သူများ လုပ်ဆောင်လုပ်ဆောင်နိုင်သော အရာ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် သူတို့သည် အလောင်းကို ခိုးယူကြမည်ဆိုလျှင် တပည့်တော်များက ၎င်း ၏ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းဟောပြောကြသည့်အခါတွင် ဖွင့်ဟဝန်ခံကြမည်မှာ သံသယဖြစ် ဖွယ်မရှိပါ။ သို့သော် ခရစ်တော်၏ရန်သူများသည် ထိုသို့လုံး၀ ဆိုကြပါ။ အဘယ့်ကြောင့်နည်း။ သူတို့သည် ထုတ်ယူမည့်ခန္ဒာမရှိကြသောကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သင်္ချိုင်းသည် ဗလာကျင်း ထားလျက်ရှိပါသည်။ ခရစ်တော်သည် သေခြင်းမှ ထမြောက်တော်မူသည်။
“ဤအမှုသည် ဆိတ်ကွယ်ရာ အရပ်၌ပြု သောအမှုမဟုတ်ပါ။” ( (တမန် ၂၆း ၂၆ )
ဗလာကျင်းသင်္ချိုင်းဂူသည် သေခြင်းမှ ခရစ်တော်ထမြောက်ခြင်း၏ ပထမသက်သေအထောက် အထားတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုထက်များစွာသောအချက်ရှိနေသေးသည်။
၂။ ဒုတိယအချက်၊ မျက်မြင်သက်သေများ။
ယေရှုသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံရသောအခါ တပည့်တော်များသည် မျှော်လင့်ချက်မဲ့လျက်နေခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့၏ယုံကြည်ချက်မှာ ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရသကဲ့သို့ဖြစ် ပါသည်။ အမြဲတွေ့နေတစ်ဦး နောက်တဖန် အသက်ရှင်လျက် ပြန်တွေ့ရမည်ဟု မျှော်လင့်မ ထားခဲ့ကြပါ။ ထို့နောက် ယေရှုကြွလာတော်မူခဲ့သည်။
“ယေရှုသည် ကြွလာ၍ အလယ်မှရပ်တော်မူလျက်၊ သင်တို့၌ ငြိမ် သက်ခြင်းရှိစေသတည်း။” ( ယောဟန် ၂၀း ၁၉ )
တပည့်တော်များက သူနောက်တဖန်အသက်ရှင်ကြောင်းကို မြင်ခဲ့ကြပါသည်။
“အသေခံတော်မူပြီးလျှင်၊ တမန်တော်တို့အား အရက်လေးဆယ် ပတ်လုံး ကိုယ်ကိုပြ၍ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သော အရာတို့ကို မိန့်မြွတ်တော်မူလျက်၊မိမိအသက်ရှင်သည်အကြောင်း ကို ခိုင်ခံသောသက်သေအများအားဖြင့် ပြတော်မူ၏။” ( တမန် ၁း ၃ )
တမန်တော်ပေါလုက ရှင်ပြန်ထမြောက်သော ခရစ်တော်ကို တွေ့ခဲ့လေသည်ဟုဆိုပါသည်။
“ကေဖ ( ပေတရု ) သည် ကိုယ်တော်ကိုမြင်ပြီးမှ၊ တကျိပ်နှစ်ပါးသော သူတို့သည် မြင်ရကြ၏။ ထိုနောက် ညီအစ်ကိုငါးရာမက၊ တပြိုင် နက်မြင်ရကြ၏။ ထိုသူတို့တွင် အများသောသူတို့သည် ယခုတိုင် အောင် အသက်ရှင်ကြသေး၏။ အချို့တို့သည် အိပ်ပျော်ကြပြီ။ ထို့ နောက် ယာကုပ်မြင်ရ၏။ ထို့နောက် တမန်တော်အပေါင်းတို့သည် မြင်ရကြ၏။ နောက်ဆုံးတွင် အချိန်မတော်မတန်ဘွားသောသူကဲ့ သို့ဖြစ်သော ငါပင်မြင်ရ၏။” ( ၂ ကော ၁၅း ၅-၈ )
ဒေါက်တာ John R. Rice က ဤသို့ဆိုသည်။
ယေရှုသည် ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ပိုင်း မျက်မြင်သက်သေ တွေရဲ့မြင်တွေ့ခြင်းအကြောင်းကို လွယ်လင့်တကူ ကူးစက်ပျံ့နှံ့ သွားခြင်းမှာ အဘယ်မျှလောက်မြန်ဆန်သည်ကို ဆင်ခြင်ကြည့်ပါ။ အချို့တို့က ရက်ပေါင်းလေးဆယ်အတွင်း ထပ်ခါထပ်ခါ မြင်တွေ့ခဲ့ ကြရပါသည်။ ( တမန် ၁း ၃ ) သမ္မာကျမ်းစာစည်းမျဉ်းမှာ “မျက်မြင် သက်သေ နှစ်ဦး သို့မဟုတ် သုံးဦး၏ နှုတ်၌” ဟုဆိုပါသည်။ ဤ နေရာတွင် ရာပေါင်းများစွာသော မျက်မြင်သက်သေများရှိသည်။ လူတစ်ဦးသည် သက်သေ တစ်ဦး သို့မဟုတ် နှစ်ဦးတို့၏မျက်မြင် သက်သေအားဖြင့် သေပြစ်ကို စီရင်ကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။
အရေးကြီးသောကိစ္စကိုဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ရာတွင် ဂျူရီလူကြီး အဖွဲ့ ဆယ့်နှစ်ဦး၏နှုတ်ထွက်လိုအပ်သည်။ ဤနေရာတွင် ရာ ပေါင်းများစွာသော မျက်မြင်သက်သေတွေက ယေရှုထမြောက် သည်အကြောင်းကို မျက်စိဖြင့်မြင်ခဲ့ကြပါသည်။ သေပြီး သုံးရက် မြောက်သောနေ့တွင် သေလျက်ရှိနေသေးသည်ဟု အဘယ်တစ် ဦးကမျှ သက်သေမခံကြပါ။ သက်သေအထောက်အထားများကို လည်း ဆန့်ကျင်သူမရှိပါ။ ထိုသက်သေများ၏သက်သေခံချက်များ၊ မျက်မြင်သက်သေ များ၊ ကယ်တင်ရှင်ကို လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ထိသော သက်သေ များ၊ ထိသောသူများ၊ ခြေဖဝါးနှင့်လက်ဖဝါးရှိ သံမှိုရိုက်သောအမာ ရွက်များကို မြင်ကြ၊ ထိကြသူများ၊ စားသောက်သည်ကို မြင်ကြသူ များ၊ အရက်လေးဆယ်တိုင်တိုင် အတူရှိနေကြသူများဖြစ်ကြပါ သည်။ ထိုသက်သေများသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု သို့မ ဟုတ် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အခြားတိုင်းနိုင်ငံများရှိတရားရုံးရှေ့မှောက်တွင် တောင်းဆိုထားသောကိစ္စထက်ပင် ခိုင်မာသည့် သက်သေအ ထောက်အထားပင်ဖြစ်ပါသည်။ မယုံကြည်လိုသောသူများနှင့်ငြင်း ပယ်ထားသော သက်သေများကို မစစ်ဆေးသူများကြသာလျှင် သက်သေသည် အလွန်လွှမ်းမိုးထားသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ယေ ရှုသည် “မကျဆုံးနိုင်သောသက်သေများစွာဖြင့် ဒုက္ခဝေဒနာခံစား ပြီးနောက်တွင် အသက်ရှင်ကြောင်း မိမိကိုယ်ကို ထင်ရှားပြသခဲ့ သည်” ဟုဆိုပါသည်။ တမန် ၁း ၃ (John R. Rice, D.D., The Resurrection of Jesus, Sword of the Lord Publishers, ၁၉၅၃၊ စာ- ၄၉-၅၀ )
ဗလာကျင်းထားသောသင်္ချိုင်းဂူ၊ ရာပေါင်းများစွာသော မျက်မြင်သက်သေများမှာ သေခြင်းမှ ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းနှင့်ဆိုင်သည့် ခိုင်မာသောသက်သေပင်ဖြစ်ကြပါ သည်။
၃။	တတိယအချက်၊ တမန်တော်များ၏မာတုရဖြစ်ခြင်း။
ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းသည် မုသာဖြစ်ခဲ့မည်ဆိုလျှင် တမန်တော်တိုင်းသည် ထိုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုကြွေးကြော်ရင်း ဒုက္ခဝေဒနာကို ခံခဲ့ကြသနည်း။ တမန် တော်တို့သည် ခရစ်တော်၏ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကို ဆက်လက်၍ ဟောပြောသည်သာမ က ထိုအကြောင်းကို ငြင်းပယ်သည်ထက် သေခြင်းကို ပို၍နှစ်သက်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသင်းတော်သမိုင်းကိုလေ့လာကြည့်သော တမန်တော်တိုင်း (( ဒုက္ခခံလျက် ပြည်နှင်ဒဏ်ပေး ခံရသော - ရှင်ယောဟန်မှတပါး ) အားလုံးသည် ပြင်းထန်သော သေခြင်းဖြင့် အသေခံခဲ့ကြရပါ သည်။ အကြောင်းမှာ ခရစ်တော်သည် သေခြင်းမှထမြောက်သည်ဟု ဟောကြသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါက်တာ D. James Kennedy က ဤသို့ဆိုသည်။
ဤအရာမှာ အလွန်ပင် အရေးကြီးသည့် အချက်ဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ပညာသမိုင်းကြောင်းတွင် လူတစ်ဦးသည် မုသာစကားဟု သူ သို့မဟုတ် သူမသိခဲ့သောအရာအတွက် မိမိအသက်ကိုပေးလို သည့်စိတ်ဆန္ဒရှိသည်ဟူသောအချက်မှာ လုံးဝသိရှိဖူးခြင်းမရှိပါ။ ဘုရားသခင်က တမန်တော်များ၊ နှင့် ကနဦးခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူ တို့အား ထိုသို့သောဒုက္ခဝေဒနာများ၊ ပြင်းထန်သောအရာများ၊ မ ယုံကြည်နိုင်လောက်သည့် ဒုက္ခများကို ခံစားစေသည်အကြောင်း ကို အံ့ဩခဲ့ဖူးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၌ သစ္စာရှိခြင်း၊ သက်သေလက္ခဏာ၊ ဒုက္ခဝေဒနာခံရခြင်းနှင့် မျက်မြင်သက်သေတို့၏သေခြင်း၊ အထူး သဖြင့်အများသောသူတို့သည် ၎င်းတို့၏သက်သေခံချက်ကို ၎င်း တို့ကိုယ်တိုင်၏အသွေးဖြင့် တံဆိပ်ခတ်ခဲ့ကြသည်။ Paul Little က ဆိုထားသည်မှာ “လူတို့သည် ၎င်းတို့ယုံကြည်ချက် မှန်ကန် သောအရာအတွက် အသေခံလိမ့်မည်။ သို့ရာတွင် မုသာ ဟု သူတို့ထင်မှတ်ထားသောအရာအတွက် အသေခံကြလိမ့်မည်မ ဟုတ်” ဟုဆိုသည်။ (D. James Kennedy, Ph.D., Why I Believe, Thomas Nelson Publishers, ၂၀၀၅၊ စာ- ၄၇ )
ဤသူတို့က ခရစ်တော်သည် သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူသည်ကိုမြင်သည်ဟု ဆိုကြသော ကြောင့် အသေသတ်ခြင်းကို ခံကြရသည်။
ပေတရု- ကြာပွတ်ဖြင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ရိုက်ခြင်းကိုခံရပြီး လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် စောက်ထိုးပြောင်းပြန်အသတ်ခံရသည်။
အန္ဒြိ၊ ဇေဗေသဲ ၏ သား - ကားစင်ပေါ်တွင် X ပုံစံဖြင့်အသတ်ခံရသည်။
ယာကုပ်၊ ဇေဗေသဲ ၏ သား- ခေါင်းဖြတ်ခံရသည်။
ယောဟန္ - ဆူပွတ်နေသောဆီထဲတွင် ထည့်ပြီးနောက် ပတ်မုတ် ကျွန်သို့ ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခံရသည်။
ဖိလိပု - ကြာပွတ်ဖြင့်အရိုက်ခံရပြီးနောက် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်အသတ်ခံရ။
ဗာသောလမဲ - အသက်ရှင်လျက် အရေခွံခွါပြီး ကားစင်ပေါ်အသတ်ခံရ။
မဿဲ - ခေါင်းဖြတ်ခံခဲ့ရသည်။
ယာကုပ် ၊ ခရစ်တော်၏ညီ - ဗိမာန်တော်ထပ်ဖျားမှ ပစ်ချခြင်းခံရသည်။ ထို့နောက် သေသည်အထိ အရိုက်ခံရသည်။
တာတိယဲ - သေသည့်တိုင်အောင် မြှားဖြင့်အပစ်ခံရသည်။
မာကု - သေသည်အထိ ဒရွက်တိုက်ဆွဲခံရသည်။
ပေါလု - ခေါင်းဖြတ်ခံရသည်။
လုကာ - သင်္ဘောတဖန်းပင်ပင်ပေါ်တွင် ချိတ်ထားခြင်းခံခဲ့ရသည်။
သောမ - လှံဖြင့်ထိုးပြီး လောင်သောမီးထဲသို့ ပစ်ချခြင်းကို ခံရပါ သည်။
၁၉၉၇၊ စာ- ၅-၁၀၊ Greg Laurie, Why the Resurrection? Tyndale House Publishers, ၂၀၀၄၊ စာ-၁၉-၂၀ )
ဤသူတို့သည် ကြောက်မက်ဖွယ်ဝေဒနာကိုခံစားပြီး ကြောက်မက်ဖွယ်သေခြင်းဆိုးဖြင့် အသေ ခံကြသည်။ အကြောင်းမှာ ခရစ်တော်သေခြင်းမှ ထမြောက်သည့်အကြောင်းကို ဟောပြောကြ ပါသည်။ လူတို့သည္ သူတို့ မမြင္ မတွေ့ခဲ့သော အကြောင်းအရာတစ်ခုခု အတွက္ အသေခံကြမည်မဟုတ်ပါ။ ဤသူတို့သည် သေခြင်းမှထမြောက်ပြီးနောက်တွင် ခရစ်တော်ကို မြင်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဒုက္ခဝေဒနာနှင့်သေခြင်းကတောင်မှ “ခရစ်တော်သည် သေခြင်းမှ ထမြောက်ခဲ့ပြီ” ဟူသော အကြောင်းကိုမဟောမပြောရန် မတားဆီးနိုင်ပေ။
ပေတရုသည် သောင်ပြင်တွင် ဆုံတွေ့ခွင့်ရခဲ့သည်၊
ယေရှုသည် တစ်ခါကသေဆုံးသည့် နှုတ်ခမ်းဖြင့် မိန့်မြွတ်ခဲ့၊
ခိုင်မာသောအရာ ကျို့ပဲ့၊ သေခြင်းကိုဆုပ်ကိုင်ခဲ့။
( “တဖန် အသက်ရှင်သည်” Paul Rader, ၁၈၇၈-၁၉၃၈ )
ဤသူတို့သည် လူတွေကိုကြောက်တတ်သူများအဖြစ်မှ အကြောက်အလန့်ကျင်းသော မာတုရများအဖြစ် ပြောင်းလဲလာကြသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့သည် သင်္ချိုင်းမှရှင် ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်တွင် ခရစ်တော်ကို မြင်တွေ့ခဲ့ကြပါသည်။
သောမသည် အခန်းထဲတွင် မြင်တွေ့ခွင့်ရခဲ့
(Paul Rader, ၎င်း. )
Paul Rader ရေးစပ်သီကုံးထားသည့် သံပုံသီချင်းကြီးကို ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်များက နောက်တဖန်သီဆိုဖို့ကို ကျွန်ုပ်အလွန်ပင် နှစ်ခြိုက်မိပါတကား။ ထိုသီချင်းကို တောင်းဆိုမည် ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ Dr. R. L. Hymers, Jr., P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015 သို့ စာရေးသားပေးပို့ပါ။ Paul Rader ၏ “တဖန်အသက်ရှင်သည်” သီချင်းတောင်း ဆိုချက်ဟုလည်း ထည့်သွင်းပေးပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်း သက်သေအထောက် အထားများစွာကို ဖော်ထုတ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့ကို ပိုမိုနားလည်စေမည်တော့မ ဟုတ်ပါ။ သေခြင်းမှထမြောက်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ခရစ်တော်ကို မြင်တွေ့ခဲ့ရသူတွေအချို့က တောင်မှာ “သံသယ” ဖြစ်နေကြသေးသည်။ ( မဿဲ ၂၈း ၁၇ ) သင်သည် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ခရစ်တော်ထံသို့လာရပါမည်။ လူ့ဇာတိခံယူမွေးဖွါးခဲ့သော ခရစ်တော်က ဤသို့ဆိုသည်။
“ငါ့ကိုရှာသောအခါ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့နှင့်ရှာလျှင် တွေ့ကြလိမ့် မည်။” ( ယေရမိ ၂၉း ၁၃ )
“ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းငှါ စိတ်နှလုံးဖြင့် ယုံကြည်ရမည်။” ( ရောမ ၁၀း ၁၀ )
ကျွန်ုပ်သည် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သောခရစ်တော်ကို ၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ စက်တာဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ Biola College ( ယခုတွင် တက္ကသိုလ်ဖြစ်နေပြီ ) ၏ပရိသတ်ထိုင်ရာနေရာ၌ တွေ့ဆုံခဲ့ သည်။ ထိုသို့တွေ့ဆုံခဲ့သည်မှာ လီဗရယ်ဝါဒကိုမနှစ်ခြိုက်လက်မခံသောကြောင့် ၁၉၅၇ ခုနှစ်၌ Fuller Theological Seminary ကို စွန့်ခွါသွားခဲ့သည့် ဒေါက်တာ Charles J. Woodbridge ၏တရားဒေသနာတစ်ပုဒ်ကို ကြားခဲ့ရပြီးနောက်တွင်ဖြစ်သည်။ (Harold Lindsell, Ph.D., The Battle for the Bible, Zondervan Publishing House, ၁၉၇၈၊ စာ- ၁၁၁ ကိုဖတ်ပါ။ ) သင် သည်လည်း သူ့ကိုသိလိုသောစိတ်ပြင်းပြသဖြင့် “ကျဉ်းမြောင်းသောတံခါးသို့ဝင်လျှင်” ( လုကာ ၁၃း ၂၄ ) ရှင်ပြန်ထမြောက်သောခရစ်တော်ကို ရင်ဆိုင်တွေ့ရပေလိမ့်မည်။ သင်သည် ခရစ် တော်ထံသို့လာမည်ဆိုလျှင် သင့်အပြစ်ကိုကျေအေးစေပြီး အသွေးတော်အားဖြင့် ဆေးကြော တော်မူမည်။ သင်သည် သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်သောခရစ်တော်အားဖြင့် အသစ်တဖန် မွေးဖွါးခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။ သင်သည် ခရစ်တော်ထံသို့အလျှင်အမြန်ရောက်လာရန်မှာ ကျွန်ုပ် ၏ဆုတောင်းချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ အာမင်။
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ မစ္စတာ Benjamin Kincaid Griffith က ဂုဏ်တော် ချီးမွမ်းသည်။
“ခရစ်တော်၌သာ”၊ (Keith Getty နှင့် Stuart Townend, 2001 ရေးစပ်သည်။)
“ဤအရာများကို အဂြိပမင်းကြီးသိတော်မူ၏။ ထိုမင်းရှေ့ တော်၌ အကျွန်ုပ်အတိအလင်းလျှောက်ဝံ့ပါ၏။ ဤအမှုအ ရာ တစုံတခုကိုမျှ မင်းကြီးမသိဘဲနေတော်မမူဟု အကျွန်ုပ် ထင်ပါ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ဤအမှုသည် ဆိတ်ကွယ်ရာ အရပ်၌ပြုသောအမှုမဟုတ်ပါ။” ( တမန် ၂၆း ၂၆ )
(တမန် ၂၅း ၁၉၊ ၁ ကော ၁၅း ၁၄ )
၁။	ပထမအချက်၊ ဗလာကျင်းသောသင်္ချိုင်းဂူ၊ မဿဲ ၂၈း ၁၂- ၁၅၊ ယော ဟန် ၂၀း ၁၉၊ မဿဲ ၂၇း ၆၃-၆၄၊ ၆၅၊ ၆၆။
၂။ ဒုတိယအချက်၊ မျက်မြင်သက်သေများ၊ ယောဟန် ၂၀း ၁၉၊ တမန် ၁း ၃၊ ၁ ကော ၁၅း ၅-၈။
၃။	တတိယအချက်၊ တမန်တော်တို့၏မာတုရဖြစ်ခြင်း၊ မဿဲ ၂၈း ၁၇၊ ယေရမိ ၂၉း ၁၃၊ ရောမ ၁၀း ၁၀၊ လုကာ ၁၃း ၂၄။